Ebumnuche 10 kacha elu I Kwesịrị Inweta BS na Psychology metụtara na Hodges U:
Ọmụmụ akparamaagwa mmadu, omume ụmụ mmadụ, na otu esi akpali ndị ọzọ site na oru di iche-iche, na mkparita uka, gunyere umu akwukwo ihe mmuta “Experimental Psychology”
Dmepee nkà iche echiche siri ike ma tinye echiche nke uche na ọnọdụ idozi nsogbu.
Swusie ike nkwupụta okwu ọnụ na nke ederede site na mkparita uka, oru ngo otu, na edemede.
Mepụta usoro ịkwa emo site na ezi uche ime anwansị na-agụnye ịgụ a zuru ezu oriri dịruru ná njọ na-eme dị ka ihe oriri ọkachamara maka a dịgasị iche iche nke ahịa na-elekọta ọnọdụ, gụnyere nchegbu ma ọ bụ ị substanceụ ọgwụ ọjọọ ọgwụgwọ.
Mụta otu esi ezo ndị ahịa gaa na ụlọ ọrụ obodo dabere na nyocha ha, ọnọdụ, na mkpa ndị ahịa.
Jiri uru Asambodo Ọpụrụiche na Ndụmọdụ Na-adịghị Ndụmọdụ Ndụmọdụ, nke ezubere iji kwadebe ụmụ akwụkwọ maka Akwụkwọ ikike ị Professionalụ ọgwụ ọjọọ (CAP) sitere na Board Board of Florida.